Wasiirka Warfaafinta Dowladda Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo ka hadlay xaaladda dagaal ee Tukaraq[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Wasiirka Warfaafinta Dowladda Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo ka hadlay xaaladda dagaal ee Tukaraq[Dhageyso]
Guddoomiyihii hore ee gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Qarjab
BOOSAASO – Wasiirka Warfaafinta,Isgaarsiinta iyo Dhaqanka ee Puntland Cabdi Xirsi Cali(Qarjab) ayaa maanta kula hadlay warbaahinta ,isaga oo ku sugan magaalada Boosaaso.
Cabdi Xirsi Cali(Qarjab) ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay kamid yihiin Tukaraq,safarkii Madaxweyne Farmaajo,fadeexada ay gashay BBC ee la xiriirta booqashadii Farmaajo ee Boosaaso iyo arrimo kale.
Waxa uu sheegay in danta ugu weyn ee Somaliland ka lahayd duulaanka Tukaraq ay ahayd in ay carqaladeeyaan safarkii Madaxweynaha Jamhuuriyadda markii uu booqnaayey Garoowe,laakiin aysan caano ka maali doonin.
Cabdi Xirsi Cali(Qarjab) ayaa sheegay in damaca Somaliland uu yahay mid aan suurtagal ahayn oo laga hortagayo,wuxuuna ku eedeeyey Somaliland in ay qayb weyb ka yihiin carqaladda guud ee Soomaaliya,wuxuuna tusaale usoo qaatay sida ay u taageeraan Al-Shabaab ee ku jira Buuraja silsilada Golis.
Wasiirka Warfaafinta,Isgaarsiinta iyo Dhaqanka ee Puntland Cabdi Xirsi Cali(Qarjab) ayaa ugu dambeyn uga digay kuwa tashuushka ku furaaya Isdifaacida Puntland,wuxuuna sheegay in meel looga soo wada jeesto.
Hoos ka dhageyso Wasiirka oo dhameystiran